Ukulungiswa kweKhompyuter, iHardware kunye neSoftware- Uhlaziyo lweKhompyuter yoHlaziyo
Iikhompyuter zifuna uhlaziyo rhoqo, ulondolozo, uhlaziyo kunye nokulungiswa ngamanye amaxesha.
Ukugcinwa rhoqo kweekhompyuter kuthetha ukuqinisekisa ukuba ikhompyuter isebenza ngokugqibeleleyo, ukulahla iimpazamo, ukukhawulezisa, ukugcina ikhompyuter yakho isemgangathweni kwaye ikhuselekile ngokupheleleyo. Ukugcina ukuphuculwa kwetekhnoloji engqondweni, ikhompyuter ifuna uhlaziyo rhoqo kunye nohlaziyo. Oku kuthetha ukuba, kanye ngexeshana kuya kufuneka uhlaziye isoftware kunye nezixhobo zekhompyuter yakho.
Sikunika uluhlu lweengcali ezinokukunceda kulungiso lwekhompyuter kunye nolondolozo.
Ukuphuculwa kwesoftware kubandakanya ukuvuselelwa kwe-antivirus, iifestile, abadlali beendaba, abaqhubi, njl. iphuculwe ngesoftware kunye nehardware eqinisekisa ukusebenza kakuhle kunye nokhuseleko.
Nangona abantu becinga ngokususa iingxaki okanye ukulungisa iimpazamo bebodwa, kodwa kuyacetyiswa ukuba kuqeshwe umboneleli ngenkonzo yekhompyuter ukuqinisekisa ukuba yonke into isebenza kakuhle kwaye uneenkonzo ezilungileyo.
Ukulungisa, Ukuphucula, Ukuhlaziya
Ikhompyuter sisixhobo esisetyenziselwa ukwenza iinkqubo ezahlukeneyo. Iicompyuter zifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kwaye zisetyenziselwa ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo enceda ukonga ixesha kunye nemali. Zininzi iisoftware ezikhoyo ezinceda ukuqhubekekisa imisebenzi eyahlukeneyo ngokutyibilikayo.
Isoftware kudla ngokubhekiswa kuyo njengezicelo, ezenza imisebenzi ngokuzenzekelayo kwaye zenze iinkqubo zibe lula kakhulu. Oku kwenza ulawulo lula kakhulu.
Fumana abanye abaBoneleli
ngokuKhangela kuluhlu lodweliso lokukhangela kukuvumela ukuba ufumane uluhlu lweengcali ezikunceda ngokulungiswa kwekhompyuter yakho kunye nesoftware. Baza kukunceda ngokuqhuba kunye nesoftware eqinisekisa ukusebenza kakuhle kwikhompyuter yakho.
Uluhlu lwethu lweenkonzo zokulungisa iikhompyuter lubandakanya abaqeqeshi bengingqi nabakwi-Intanethi abanokukunceda kuzo zonke iingxaki ezinkulu okanye ezincinci kwikhompyuter yakho. Abanikezeli kuphela ngokubonisana kodwa bakwabonelela ngenkonzo yokulungisa kunye nokuphucula ngokusekwe kwiimfuno zakho.
Unokhetho lokuhlenga ababoneleli beenkonzo ngokwengingqi kwaye ungasebenzisa ukhetho lokuqesha ababoneleli beshishini abalungisa ikhompyuter kwindawo yakho.
Xa kukho umba ngesixhobo sekhompyuter esiza kubangela iingxaki kumqhubi nakwisoftware. Ukongeza iihardware ezintsha, isoftware enjengehard drive enkulu, amakhadi egraphic okanye amakhadi ememori ukukhawulezisa iikhompyuter xa ukuphuculwa kwesixhobo sehardware kufuneka kolunye uhlaziyo lwesoftware.
Ukugcina ikhompyuter yakho iphuculwe kunye nesoftware kunye nezixhobo zentsimbi kuye kwaba yinto eyimfuneko, ngakumbi xa yonke into ifumana uhlaziyo. Ukufumana izixhobo zekhompyutha ezintsha neziphucukileyo ezinjengekhadi lemizobo, ihard drive, iifestile njl njl.
Ukulungiswa kweSoftware yeKhompyuter
Ukuphuculwa kweSoftware yeKhompyuter